तीज गीतमा पशुपति शर्माको वर्चस्व, यी हुन् यस वर्षका १२ चर्चित गीत [भिडियोसहित]
काठमाडौं – आज नेपाली नारीहरूको महान चाड हरितालिका तीज । तीज भन्नैबित्तिकै यससँगै जोडिएर आउँछ गीतसंगीत ।
गीतसंगीतसँग तीजको चर्चा र लोकप्रियता जोडिन्छ । कुनै समय अडियोको जमाना थियो । क्यासेट बिक्रीबाट गीतसंगीतको लोकप्रियता र नाफा–घाटा मापन गरिन्थ्यो । अहिले जमाना फेरिएको छ ।
युट्युब गीतसंगीतको लोकप्रियता मापन गर्ने गतिलो माध्यम बनेको छ । कलाकारहरूले आफ्ना गीतको भिडियो कतिपटक हेरियो भन्ने तथ्यांकका आधारमा गीतको लोकप्रियता मापन गर्छन् । विगतका वर्षहरूमा जस्तै यसवर्ष पनि थुप्रै तीज गीत आए । तिनका भिडियोहरू युट्युबमा सार्वजनिक भए ।
जसमध्ये केहीले राम्रै चर्चा पाए भने केही त्यत्तिकै सेलाए । हामीले यहाँ युट्युब भ्युजका आधारमा यस वर्षका उत्कृष्ट १२ तीज गीत छनोट गरेका छौं ।
१. खिस्स हाँस्ने छोरो
यसवर्ष सार्वजनिक तीज गीतमध्ये ‘खिस्स हाँस्ने छोरो’ले सर्वाधिक भ्युज पाएको छ । रोशन गैह्रे र आशा केसीको स्वर रहेको यस गीतको भिडियो तीजको पूर्वसन्ध्यामा यो समाचार तयार पार्दासम्म २९ लाख ६८ हजार ७ सय ४६ पुगेको छ । रोशनकै शब्द तथा संगीत रहेको गीतको भिडियोमा पछिल्लो समयकी व्यस्त मोडेल करिष्मा ढकाल र रोशन गैरेले अभिनय गरेका छन् । भिडियोलाई रोशन आफैंले निर्देशन गरेका हुन् ।
२. लौरी हरायो
तीज गायकको उपमा समेत पाएका गायक पशुपति शर्माको स्वरमा यसवर्ष पनि दर्जन बढी तीज गीतहरू सार्वजनिक भएका छन् ।
उनका गीतको भिडियोले युट्युबमा पनि राम्रै भ्युज पाएका छन् । जसमध्ये शर्माकै शब्द, संगीत तथा स्वरमा रहेको ‘लौरी हरायो’ बोलको गीतले राम्रै चर्चा पाइरहेको छ ।
पशुपतिकै शब्द तथा संगीत रहेको गीतमा पशुपति, राजु ढकाल, देवी घर्ती र सुस्मिता घर्तीको स्वर सुन्न सकिन्छ । यो गीतलाई मंगलबार साँझसम्म २९ लाख ५९ हजार ३ सय ६५ पटक हेरिएको छ ।
भिडियोमा पशुपति शर्मा, राजु ढकाल, देवी घर्ती र सुस्मिता घर्तीले अभिनय गरेका छन् । भिडियोलाई दुर्गा पौडेलले निर्देशन गरेका हुन् ।
३.यही माया हो
यसवर्ष गायक पशुपति शर्माले सार्वजनिक गरेको अर्को गीत हो,– ‘यही माया हो’ । शर्माको यो गीतले पनि युट्युबमा राम्रो भ्युज कमाएको छ । शर्माकै शब्द, संगीत तथा स्वर रहेको यो गीतलाई २४ लाखभन्दा बढीपटक हेरिएको छ । शर्मालाई गायनमा सम्झना भण्डारीले साथ दिएकी छिन् । गीतको भिडियोमा स्वयं गायक–गायिका (पशुपति र सम्झना)को नै अभिनय रहेको छ । भिडियोलाई प्रकाश भट्टले निर्देशन गरेका छन् ।
जिरे खुर्सानी कमेडी तीज गीत ‘आमा’ले पनि युट्युबमा उत्कृष्ट भ्युज पाएको छ । सन्तोष केसी, राधिका हमाल तथा ललिता पौडेलको स्वर रहेको यो गीतको भिडियोलाई यो समाचार तयार पार्दासम्म २० लाख १७ हजार बढीले हेरिसकेका छन् ।
गीतमा सन्तोष केसी र सुष्मा अधिकारीको शब्द तथा सन्तोष केसीको संगीत समावेश छ । गीतको भिडियोमा लक्ष्मी गिरी, रमा थपलिया, शिवहरि पौडेल, अञ्जु महर्जन, सुनिता गौतम, पुरुषोत्तम भण्डारी लगायतको अभिनय देख्न सकिन्छ । भिडियोलाई प्रकाश भट्टले निर्देशन गरेका हुन् ।
५. मार्‍यो दैया
विष्णु माझीको एकल स्वर ‘र्मायो दैया’ तीज गीतले युट्युबमा उत्कृष्ट भ्युज पाएको छ । गीतको भिडियोलाई १७ लाख ६१ हजारभन्दा बढीपटक हेरिसकिएको छ । सुन्दरमणि अधिकारीको शब्द तथा संगीत रहेको गीतको भिडियोमा निता ढुंगानाले अभिनय गरेकी छिन् । भिडियोलाई शिव विकले निर्देशन गरेका हुन् ।
६. एउटा जरुरी कुरा छ
‘एउटा जरुरी कुरा छ’ बोलको तीज गीतमा खुमन अधिकारी र देवी घर्तीको स्वर छ । जुन गीतलाई युट्युबमा धेरै दर्शकले हेरिसकेका छन् । महेन्द्र भण्डारीको शब्द तथा संगीत रहेको गीतलाई यो समाचार तयार पार्दासम्म १६ लाख २४ हजारभन्दा बढीपटक हेरिएको छ । सुमन थापा मगरको निर्देशनमा तयार भएको भिडियोमा निर्मल क्षेत्री र अञ्जली अधिकारीले अभिनय गरेका छन् ।
यस वर्षको अर्को लोकप्रिय तीज गीत हो– ‘माननीयज्यू’ । जुन गीत गायक पशुपति शर्मा र राष्ट्रियसभा सदस्य तथा गायिका कोमल वलीले गाएका हुन् । गीतमा पशुपतिकै शब्द, संगीत छ । यस गीतले पनि युट्युबमा उत्कृष्ट भ्युज पाएको छ । यो गीतलाई मंगलबार साँझसम्म १५ लाख २० हजार भन्दा बढीपटक हेरिएको छ । गीतको भिडियोमा पनि गायक शर्मा र गायिका वलीकै अभिनय रहेको छ । भिडियोमा दुर्गा पौडेलको निर्देशन छ ।
८. माइतीको आँगनी
गायिका सुनिता सेनको स्वरमा ‘माइतीको आँगनी’ शीर्षकको तीज गीतले युट्युबमा १४ लाख ९१ हजारभन्दा बढी भ्युज पाएको छ । गणेश अधिकारीको शब्द÷संगीत रहेको गीतमा अञ्जली अधिकारी र करिष्मा ढकालले अभिनय गरेका छन् । भिडियोलाई स्मृति तिमिल्सिना (गुरुआमा)ले निर्देशन गरेकी हुन् ।
९. आऊ दिदी बहिनी हो
कोमल वली र प्रज्ञा वलीको स्वरमा ‘आऊ दिदी बहिनी हो’ तीज गीतले पनि श्रोता तथा दर्शकको मन जित्न सफल भएको छ । यो गीतको भिडियोलाई १३ लाखभन्दा बढीपटक हेरिएको छ । यो गीतमा एकनारायण भण्डारीको शब्द÷संगीत रहेको छ । राजेश घिमिरेको निर्देशन रहेको गीतको भिडियोमा कोमल वली, रबिन्द्र खडका, प्रज्ञा वली, शरद चौलागाईं लगायतले अभिनय गरेका छन् ।
‘उधारो’ तीज गीतलाई हरि डिसी, उषा मगर र वीरेन्द्र खड्काले गाएका छन् । यो गीतले पनि युट्युबमा राम्रो भ्युज पाउन सफल भएको छ । भिडियोलाई युटयुबमा १२ लाख ५९ हजारभन्दा बढीपटक हेरिएको छ ।
गीतमा दुर्गा केसीको शब्द तथा वीरेन्द्र खड्काको संगीत छ । हरि डिसी तथा अनिता बस्नेतको अभिनय रहेको गीतको भिडियोलाई रेशम सापकोटाले निर्देशन गरेका हुन ।
११. नौरंगी सपना
प्रकाश सपुत, मञ्जु विक र काजल गुरुङको स्वरको ‘नौरङ्गी सपना’ गीतले पनि युट्युबमा राम्रो स्थान पाएको छ । गायक प्रकाशकै शब्द तथा संगीत यो गीतलाई १२ लाख २१ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ ।
प्रकाश सपुतकै निर्देशन रहेको गीतको भिडियोमा हिउँवाला गौतम, दिपासा बिसी, प्रकाश सपुत, अञ्जली अधिकारी, करिश्मा ढकाल, आरुषी मगर, सिर्जना रेशमी मगर, सबु राई तथा विराज थापाले अभिनय गरेका छन् ।
१२. उल्टो सुनेर
खुमन अधिकारी र विष्णु खत्रीको स्वरको ‘उल्टो सुनेर’ गीतको भिडियोले पनि युट्युबमा लाखौं भ्युज पाएको छ । भिडियोलाई १२ लाख २१ हजारभन्दा बढीपटक हेरिएको छ । जेके अधिकारीको शब्द तथा खुमन अधिकारीको संगीत रहेको गीतको भिडियोमा खुमन र सुस्मिता सापकोटाले अभिनय गरेका छन् । भिडियो निर्देशन दुर्गा पौडेलको हो ।